Umhla My Pet » 10 Imithetho Dating For Women
ngokuthi mihaela Schwartz
ukubuyekezwa: Feb. 25 2020 | 3 min ukufunda
Ingaba kukho nayiphi na imithetho xa uthandana? Kunjalo kukho. Abaninzi kubo, enyanisweni, kodwa inkoliso yabo inkcubeko conditioner kwaye kunokwahluka ukusuka kwelinye ilizwe ukuya kwelinye kwaye ukusuka kwesinye isizwe ukuya kwelinye. nokuba, kukho imigaqo esisiseko zisaseleyo esebenzayo ehlabathini lonke. Nantsi ke 10 imiyalelo abafazi mabahloniphe xa uthandana:
1. Return Calls Ngendlela Ngexesha
Amabhinqa kufana nokuthatha ixesha phambi kokuba emva mfo obonakala ungathanda kubo. Ukuba nomdla kuloo mntu, kakhulu, uza kubuyela umnxeba wakhe ngendlela efanelekileyo. Nokuba ufuna ukudlala nzima ukufumana, zama ukufumana phezu 48 iiyure umda ngaphandle isizathu esilungileyo. Ukuba ngaphandle kwedolophu akukho kuphinda inkcazelo esebenzayo. Wonke umntu ifowuni ephathwayo mihla, okanye phantse wonke umntu.
2. Beka Izithembiso zakho
Mhlawumbi bacinga ukuba kulula amadoda kunokuba abafazi rhandzana jungle zasendle. Yikholwe okanye hayi, oku kuyinyaniso. Akusoloko kulula ukufumana isibindi ukucela intokazi. Ukuba wenza oku, kwaye wathi ewe, zama ukunamathela izicwangciso zakho. Musa nje kubiza ukucima le ngomzuzu wokugqibela. Ukuze ufumane bacinge wena ukuba lukhulu kuye. kakuhle, kuhle ngokugqibeleleyo ukuba abe, kodwa ke kwimeko enjalo kufuneka akuvumelani kwindawo yokuqala.
3. Samyeka Khokelani
Ngaba oku ngathi indala kakhulu lixesha kuwe? Uza kothuswa kukufumanisa ukuba zininzi izinto zenziwa ngendlela esidala. abantu abaninzi bayakuvuyela ukuba umzingeli, ubuncinane kancinci. Makhe wena Bazingele, kodwa kumnceda ukuba kuyimfuneko kuba ngokumthumela iziganeko ekunene.
4. Akukho Talks Eks
Shiya olu isihloko uncokola ri- kunye abahlobo bakho! A ethululwayo kumantombazana si fa kakhulu meko ukuthetha ex yakho. Ngaphandle kokuba uzifihle ngayo, musa kubhenca yakho yonke elidlulileyo Liqula ngeli xesha lokuqala solwalamano lwakho.
5. Gcina Focus yakho Smile
Uncumo ixabisa ngaphezu Makhesenze babumba. Oku bukhanyisa ubuso bakho kwaye ikuvumela lover yakho ezinokubakho ukubona ezona kuni. Nangona ngomhla, zama ukunikel 'ingqalelo yakho phezu kwakhe, kwaye uphephe wajika intloko yakho emva kwezinye guys, kungakhathaliseki ukuba shushu ukuze babe. Phulaphula yintoni uye wathi, ukugcina zoqhagamshelwano iliso, kwaye kube ndisebenza. Nantso isimo umntu nokulindeleyo. Ukuba ikrakra, wakruthakrutheka, belusizi, yena Unokulibala kubiza koko.
6. Musa ukusela kakhulu
I-atmosfera uzolile yaye nje. Yonke ibonakala isebenza kakuhle nje. Nawe uvakalelwa ukuba neecocktails ezimbalwa okanye iiglasi zewayini. musa! Akukho mntu uthi wena abavumelekanga ukuba angamchukumisi iziselo ezinxilisayo. Kanye ungayibaxi. Bangabi sexy ocinga isiphumo.
7. Musa ukufana umembi yegolide
Yintoni owukhethayo, ekufumaneni soulmate yakho, okanye umthombo mali yethutyana. Musa siziphathe ngokungathi yena yebhanki yakho. Ukuba ugqiba ukuthenga isipho kuwe, sikwamkela oko, kodwa musa wucele. Ngaphezu koko, akavumelani kuye ekuhlawuleni irente, okanye Ndininika isixa ngenyanga imali njengoko ukuze kuphela nje ndiziva ngathi ukuthenga uthando lwakho.
8. Kuba yinkosikazi
Khumbula imithetho ezisisiseko ukuziphatha abazali bakho yanifundisayo xa wawu- itakane? Baya uyasebenza xa uthandana. Musa ukulibala indlela yakho uze ugcine usebenzisa amagama ezixabisekileyo "nceda" kwaye "enkosi" nokuba uyazi kakuhle sele. Ingqondo yokuma kwakho kwaye musa alaqhenqetha imilenze yakho evulekileyo ifana dude nokuba wena unxibe ibhulukhwe. Umfazi refined akabalibali ngezi imithetho ezincinane esisiseko emva kweminyaka yomtshato.
9. Bonisa umdla yakho
Ukuhlawula mfo yabo nokumncoma yinto amabhinqa ukulibala ukwenza. Amadoda nje ukuva amazwi intle obucothayo njengoko kuthi. Musa ukuthandabuza ukumxelela ukuba ujonga olukhulu kuloo ihempe entsha awayibeka phezu ngakumbi kuwe. Bonisa umdla yakho ngokwenza into entle kuye! Yena uza ukuya kwisidlo? Yini na ke ukuba nina kumema ukuba indawo yakho ikhaya isidlo senzelwe utshintsho? Uyazi ukuba yintoni cookies bakhe endiyithandayo? Khangela yeresiphi ukubhaka inyanda entle kuye. izijekulo ezilula ezi ukuthumela umyalezo. Baya kumbonisa ukuba umkhathalele kwaye ukuba benza umgudu, kakhulu.
10. Musa ze ngomhla wokuqala
Ukuthanda umntu ukuqala ukumbona? Abantu abaninzi baya kuxoxa ukuba yintabatheko nje. kodwa, masithi zawa nokusithanda kwixesha lokuqala amehlo nganye kwaye oko Mutual. nokuba, zama ukuba bazikhwebule ekufumaneni ze ngomhla wokuqala. Unako kiss kwaye ukuncomana, kodwa igqithiselwe isantya usoloko zalo eziluncedo. Indlela enye yayiza nincokola ngazo ukwenza uthando hayi nje ngesondo?
Ukuthandana intanethi Ukufumana phantsi?